China Dongshen ahịhịa okomoko eke rụrụ rụrụ dị ọcha badger ntutu resin na -ejikwa akara ịkpụ afụ ọnụ maka ịkpụ afụ ọnụ ihu onye nrụpụta na onye na -eweta ngwaahịa | Dongmei
Dongshen ahịhịa okomoko eke rụrụ rụrụ dị ọcha badger ntutu resin na -ejikwa akara ịkpụ afụ ọnụ iji mee ka ajị ihu dị nro
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ntutu badger dị ọcha na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị. A pụkwara ịhazi agba na aha mmado.
Badger Ọkachamma Nchacha afụ ọnụ Maka ndị nwe obodo niile
Ị na-achọ 100% Badger Hair Bristles Quality Shaving Brush nke ga-eme ka ịkpụ afụ gị ka ọ bụrụ ahụmịhe dị ka onye na-akpụ isi?
Na -emeso Onwe Gị Maka Nkasi Obi Ahịhịa ahịhịa kacha mma Nke Dongshen dere
Mepụta ajị ajị ajị ajị anụ ma nye ahụmịhe ịkpụ afụ na -enye ume ọhụrụ site na mma ụlọ gị! Ọmarịcha ahịhịa anyị na -akpụ afụ ọnụ, nke emere naanị site na 100% ajị anụ dị nro ga -enyere gị aka ịchekwa oge na ego na ndị na -akpụ isi!
Chọta maka ịdị mma na nkenke nke ịme ntutu ihu gị ka ọ dị mma n'oge na -eji ahịhịa na -akpụ akpụ mara mma nke ga -eji nwayọ kpochapụ akpụkpọ gị, na -emepụta mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ ọhụrụ ma na -enye ihu gị ọmarịcha mara mma, mara mma!
Akụrụ ọnụ ihe Ajị badger (ajị ajị dị ọcha)
Brush Ahịhịa e ji aka mee nke nwere ntutu nchara 100% - Oke dịkwa oke. Ọmarịcha ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ nke ụmụ nwoke, mana ọ masịkwara ụmụ nwanyị!
Soap Na -eji ncha ịcha afụ kacha amasị gị. Ntutu Badger anyị kachasị mma bụ baajị kacha mma. na eriri ahịhịa anyị ejiri aka mee ga -adịru ọtụtụ afọ mgbe ejiri lekọta ya nke ọma.
Ntutu Badger Dị Ọcha
Ahịcha na -ehicha ajị ajị dị ọcha na -enwekarị ntutu sitere na ajị anụ. Ntutu isi a dịgasị iche n'ịdị nro, na -agbakarị ọchịchịrị na ogologo ogologo ya na -eme ka ọ dị arọ karịa ajị ajị ndị ọzọ. Agbanyeghị, ọ bụkwa ihe a na -ahụkarị ka ọ na -ekpuchi mpaghara kachasị na ahụ badger. Nke a bụ ihe kpatara na ịcha ntutu ji ajị anụ dị ọcha adịtụ ọnụ ala karịa baajị kacha mma ma ọ bụ ọla ọcha.
Nke gara aga: Dongshen okomoko adịchaghị mma na-enweghị eriri eriri sịntetik ntutu resin na-ejikwa akara ngosi ihu ihu ahịhịa ahịhịa
Osote: Dongshen Brush N'ogbe Blue Resin na -ejigide ntutu Black Badger na -adịgide adịgide ahịhịa ahịhịa ụmụ nwoke na -ehicha.
Ahịhịa ahịhịa kacha mma
Omenala Ịcha afụ ọnụ
Dongshen KABUKI ihu ihu adịchaghị vegan fibe ...
Dongshen etemeete ahịhịa vegan enyi na enyi soft synth ...
Dongshen onwe labelụ N'ogbe inogide ọla ...
Dongshen N'ogbe green etemeete ahịhịa top quali ...
etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha,